Ahoana ny famokarana seleria?
Sariaka mahatsiravina - zavamaniry avy amin'ny karazam-borona antsim-bary, dia kolontsaina legioma miely patrana. Ny ampahany rehetra amin'io zavamaniry mahasoa indrindra io dia ampiasaina amin'ny sakafo: green overground (petioles sy ravina) ary ambanin'ny tany (kisendrasendra). Ny seleri koa dia ampiasaina amin'ny sehatry ny tosi-drà, satria manana hery manasitrana mahery vaika be dia be izy.
Ny seleria dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny rafitra rehetra amin'ny vatan'olombelona, ​​mampiroborobo ny fanadiovana ny ra, mampihena ny fatran'ny rano-sira, manangana ny tsy fahampiana sy ny tonony (tsy mitombo ny tsindrona tosi-drà), manatsara ny fahaiza-manao, ny fiaretana sy ny sainy, manatsara ny toetry ny hoditra, manana toetra mihoapampana.
Ankoatra ny tombontsoa hafa, noho ny votoaty avo lenta, ny fototarazon'ny selera dia manana "kalôria ratsy", izany hoe, ny fampidirana tsy tapaka ny sakafo avy amin'io vokatra io dia manampy amin'ny fanesorana ny lanjany tafahoatra, izay tena misy tokoa ankehitriny ho an'ny firenena manana fari-piainana ara-toekarena sy ara-tsosialy.
Lazao aminao izay azonao atao amin'ny cherushkovogo selera, izany hoe, avy amin'ny totozy.
Mazava ho azy, afaka manampy trondro amin'ny seleria ny salady hafa afa-tsy ny salady voankazo, ary koa ny lasopy na borta toy ny voly. Izany dia atao rehefa efa vonona ny lasopy. Ny tena zava-dehibe - amin'ny fikatsahana ny harena an-kibon-dranomasina tsy ho tratran'ny habetsahana: ny ravina sy ny ravina selera dia manana tsiro matanjaka be matanjaka ary tsy misy arom-po mahery vaika. Ny habetsaky ny selera dia manondraka ny tsiron-tsakafo hafa sy ny fofony, saingy tsy tiantsika izany (ary raha toa ka manjavozavo fotsiny amin'ny pétolola dia tena ilaina izy ireo, mazava ho azy, amin'ny habetsany).
Avy amin'ny alàlan'ny sela, afaka manomana sira ianao, izay tena tsotra, mila manapotika ny tongotra amin'ny fomba mahazatra ianao ary manompa. Ary afaka mihinana izany ianao amin'ny endriky ny ovy. Ao anaty fitomboana miaraka amin'ny voatabia voajanahary voajanahary - izy io dia mahagaga ihany ny fisotroana trondro misy menaka sy matavy, ary raha mahavoky azy amin'ny mofomamy mena dia ho tena ilaina tokoa izany, indrindra ho an'ny lehilahy. Azo ampiasaina amin'ny tsiro voatabia ny sotrom-boninahitra amin'ny alalan'ny fampidirana ny habetsaky ny rano, fa raha tsy misy voatango ihany ny voatabia (matetika no voasoratra ao amin'ny fonosana).
Ankehitriny, mikasika ny zavatra sy ny fomba ahafahanao miomana tsara amin'ny fakan'ny seleria.
Mazava ho azy, mazava ho azy fa azo tapahina sy ampiasaina amin'ny borscht sy sira izany - ny maina dia tsy mandaitra. Kanefa amin'ny alalan'ity fomba fitsangatsanganana ity, ny fahafahan'io fakom-bary mahafinaritra io dia, amin'ny lafiny iray, dia mihena, ary noho izany dia tsara kokoa ny manomana salads amin'ny fakan'ny selera, ary mahalalaka kokoa rehefa ny seleria ao amin'ny salady no vokatra fototra. Ny zavatra hafa dia tsy ilaina akory, satria ny fakan-kazo dia manana ny toetrany mahafinaritra mahafinaritra amin'ny marika note, ary ny tsiron'ireo ny legioma hafa dia tsy mifanaraka amin'izany. Avy eo, matokia ny fijerinao ny gilasy, andramo izany.
Salady misy fakan-javamaniry
karazan-sela maoderina - 0.5-1 p.
zavamaniry vaovao vaovao (cilantro, persily, basil, dill, lovage);
tongolo gilasy - 2-3 gny na tongolo lay;
menaka zavamaniry (tara-pahazavana na oliva mivantana mivantana);
mofomamy mofomamy mafana (tsara vao mamy);
saka amin'ny lemon na lime.
Esory ny fototry ny selera ary esoroy izany amin'ny rindrina maina na lehibe. Mbola ho tsara kokoa ny fampiasana sakay ho an'ny tsaramaso koreana - hany ka hisy fijery hafakely sy mahaliana. Raha ny tongolo lay - manapaka tsara azy, raha ny tongolo lay - tsara kokoa ny manosika milina fanontam-pirinty. Ny greens ihany koa dia voatoto tsara.
Manomàna fiakanjo avy amin'ny dibera sy sira citrouille (3: 1 na 4: 1), vanim-potoana amin'ny mofomamy mena. Hifanaraka ireo entana rehetra ao anaty vilia salady sy hisotro amin'ny akanjo. Tsara homarihina fa ny fisian'ny avocados , chicory, endivia, mofomamy mena, ny karazana karazana saha ary ny salady ravina ho an'ny salady toy izany dia tsy hampihena ny tsirony ary hampitombo ny fahafaha-manao vilia. Azonao ampiasaina koa ny voanio sesame sy ny voanio voa. Fa momba ny tongolobe dia tsy misy hevitra mazava, satria ny fofona sy ny tsiro fanonona dia ampy ihany koa.
Azonao atao ny manamboatra izany salady izany bebe kokoa, ary ny sakafom-boasary mihintsana ao aminy miaraka amin'ny tapa-kazo kely na tsotsotra (tetezana akoho, henan'akoho).
Amin'ny ankapobeny, matetika kokoa ary matetika mampiasa seleria amin'ny sakafo sy tsaratsara kokoa - vao haingana (misy anefa, ny fanoherana ny fitsaboana - ny fitondrana vohoka, ny vanim-potoanan'ny taom-piasana, ny fahasarotan'ny rafitra fitsaboana).
Ampahany amin'ny mayonnaise
Sakafo mitovitovy amin'ny dibera
Sakafo voaro - ny fomba tsara indrindra mahasalama miaraka amin'ny henam-boasary, fodiana ary hena
Potato voavoly holatra
Biby ahitra - sakafom-borona tsotra sy mahazatra ho an'ny sakafo matsiro ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Salad «Objorka» miaraka amin'ny henan'omby
Afana amin'ny rano ho vareniki miaraka amin'ny serizy
Planet Nibiru - angano na zava-misy, zava-misy mahaliana
Toeram-pialana amin'ny oval
Sosialy sosialy amin'ny ady amin'ny fihenjanana
Ny tanànan'i Maca
Loharano mena - toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Monument "Ilay Lehilahy Golden"
Toe-tsaina tsy fahita firy
Phil Collins dia manambady ny vadiny taloha
Sakafo amin'ny trongam-bary - ireo safidy tsara indrindra
Inona no antibiôtika tokony horaisiko amin'ny firaisana?
Nahoana no nofinofy ny tetezana teo ambonin'ny renirano?
Mihamaro siramamy ao amin'ny ra - ny antony